Wall putty (Skim Coat) rudzi decoration zvinhu kuti rusvingo pamusoro kumeso, rinogona kushandiswa panze uye mukati rusvingo kushongedzwa. Kimacell HPMC anobatsira inokosha basa iri pamadziro putty (skim jasi) kuvandudza kiyi ehupfumi semvura chengetedzo, akazaruka nguva, kutsemuka nemishonga, workability, etc.
Kimacell anopa zviviri HPMC kuti rusvingo putty (skim jasi) kuvandudza ehupfumi mvura chengetedzo, akazaruka nguva, Anti cack, workability, etc.
The dzakachinjwa mugwaro HPMC 37100 iri zvikuru akagadzirirwa simende anotsanangura mafomu, kufanana Single rukoko jasi, jasi skim, simende purasita.
Mugwaro unmodified HPMC MP100M vari zvoupfumi zvokusarudza, iro rinogona awane mukuru zvaida ehupfumi dzorusvingo putty kana skim bhachi.
• Excellent kushanda pamusoro
• Nyore namatidza
• Hapana Sticky kuti mudziyo
• Hapana burble kuitika
• Good Very mvura chengetedzo
• Good Anti shrinkage, Anti mutswe
More Information pamusoro HPMC Products:
1. Products kupatsanura: unmodified zvinhu pamwe pose kurapwa uye zvikuru dzakachinjwa zvigadzirwa
2. Viscosity siyana: 50 ~ 80,000 mpa.s (Brookfiled RV) kana 50 ~ 300,000 mpa.s (NDJ / Brookfied lv)
3. Quality Kugadzikana: kunovimbisa zvikuru nokugarika mishonga yedu yepamusoro.
4. Unmodified zvigadzirwa: Higher kuchena, nani kuita uye yakatsiga zvikuru
5. Altamente dzakachinjwa zvigadzirwa: Zvinhu zvemichina anopa ehupfumi nani semvura chengetedzo, vapedzisire nemishonga, kutsemuka nemishonga, yakareba akazaruka nguva, etc. zvinowanzoshandiswa Tile adhesives, Wall Putty, mumaturi, Gypsum kunobva zvigadzirwa, etc.
6. Products traceability: Tinoramba ivhu nechimwe batch mangé No. zvigadzirwa for 3 years kuti chamber chero dambudziko unhu akarerwa vatengi.
7. R & D centre: Tine nyika-kirasi R & D pakati kuitira zvikuru nyanzvi hwokugadzira kutsigira vatengi vedu.
Kima Chemical Co., Ltd iri rakaisvonaka nokutengesa hpmc nokuda Wall putty, Tile namira, zvedongo Tile namira, Tile namira dhaka, mvura yakanaka chengetedzo, yakareba akazaruka nguva, taitofanira nemishonga, nani workability mu China, riri nyanzvi mugadziri uye nokutengesa. fekitari yedu yave ichiiswa pagadzirwe yepamusoro cellulose ethers zvibereko mugiredhi maindasitiri uye kuvakwa mugiredhi kwemakore. Kana uchida zvigadzirwa zvakadaro uye handizivi kupi kunotenga, uyai kutaura nesu. We ichakupa zvemakwikwi mutengo uye mabasa ounyanzvi.
KIMA nguva dzose ndanzwawo kuti kupa vatengi: The Most Mutengo / Zvinobudirira Products.
Kana uchifarira zvinhu zvedu, tapota nesu pasina kumbozengurira.
Post nguva: Nov-13-2018
Cellulose ethers kubva Kima Chemical Co., Ltd